5ta qalab ee muhiimka ah ee loogu talagalay quraaraddaada | Kalluunka
Markaad ka bilowdo adduunka aquariums waxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad u iibsan doonto qalab gaar ah kalluunkaaga. Kaliya maaha iibsashada kalluunka, quraaradda iyo biyaha, laakiin waxaad u baahan doontaa taxane ah dheeraad si wax waliba si sax ah ugu shaqeeyaan. Qoraalkan waxaan ku tusi doonnaa waxay yihiin qalabka ugu fiican aquarium-kaaga si aad si fiican ugu ogaatid waxa ay tahay inaad kasbato.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ogaato astaamaha iyo howlgalka mid kasta oo ka mid ah ku darradan, kani waa boostadaada 🙂
Talooyin ka hor intaadan iibsan qalabka
Kahor intaadan ku degdegin inaad ka iibsato kalluunka ama dukaamada xayawaanka, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo ogaado waxa loo baahan yahay. Baahida aquarium kasta way ka duwan tahay, in kasta oo ay wada leeyihiin qaar ka mid ah. Sida laga soo xigtay noocyada kalluunka ee aad soo bandhigi doontid, cabbirka aquarium-ka, dhirta biyaha ku jirta, iwm Waxay u baahan doonaan qalabyada qaar ama kuwa kale.
Waxa ugu horreeya ee la ogaado waa baahiyaha kalluunka ee aan ku dhex yeelan doonno quraaradda. Maahan isku mid kalluunka biyaha macaan marka loo eego kalluunka biyaha cusbada leh. Mana aha wax la mid ah kalluunka kulaylaha ah marka loo eego kuwa kale ee ka yimaada biyaha qabow. Qaarkood waxay u baahan doonaan dhir dhab ah kuwa kalena qaar caag qurxin leh ayey si fiican ugu noolaan karaan.
Waxa dad badani sameeyaan markay soo galayaan adduunkan ayaa ah inay iibsadaan qalab aan tiro lahayn. Waxaas oo dhan si loo kordhiyo sharraxaadda. Si kastaba ha noqotee, in badan oo iyaga ka mid ahi waa kuwo aan loo baahnayn oo ugu dambayn yarayn doona kalluunka booskiisa dabaasha, waqtigeenna iyo, dabcan, lacagta.
Xulashada ugufiican marka laga hadlayo lahaanshaha qalabku waa in quraaradda marwalba ay ahaato mid nadiif ah oo nadiif ah. Haddii kale, xitaa haddii aan haysanno, waxay u muuqan doontaa in si xun loo daryeelay.
Qalabka ugu fiican aquarium-ka
Marka xigta waxaan qori doonnaa liis ay ku qoran yihiin aquarium-ka runtii u baahan yahay oo kaa caawin doona inaad daryeesho kalluunka. Qalabka intiisa kale waa uun qurxin oo wax waxtar leh ma keenayaan.
Tetra IN 300 oo lagu daray Filter ...
NICREW Filter for ...
Miirayaashawaxay lagama maarmaan ku yihiin quraaradda quraaradda. Waxaa loo baahan yahay ugu yaraan mid. Sidan ayaan ku hubinaynaa in shuruudaha lagama maarmaanka ah loo ilaaliyo kalluunka si uu u noolaado. Miirayaasha Iyaga ayaa mas'uul ka ah nadiifinta biyaha haraaga haraaga ah ee sameysmaya iyo in weli sabayn.
Waa lagama maarmaan in biyaha ku jira haanta kalluunka ay nadiif ahaadaan si kalluunku u caafimaad qabo. Waxay sidoo kale u adeegaan sifeynta nafleyda. Tani waxay ka dhigan tahay in qashinka loo beddelay bakteeriya waxtar u leh kalluunka.
Waxaa jira noocyo badan oo miirayaal ah, laakiin guud ahaan kuwa leh sifeynta nafleyda, makaanikada iyo kiimikada. Nooca shaandhada noocaan ah waa ku filan tahay in quraaradda aquarium ay ku wanaagsan tahay xaaladdeeda.
Ikhtiyaar kale oo kaladuwan ayaa ah inaad si gooni ah u iibsato miirayaasha. Doorashadan ayaa ka qaalisan oo u baahan dayactir dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, waxay na siinaysaa xorriyad dheeri ah xulashada waxa aan u maleyno inay lagama maarmaan tahay waana beddeli karnaa hal unug haddii ay joojiso shaqada.
Kuleyliyaha Aquarium BPS...
Kuleyliyaha Aquarium BPS
Kuleyliyaha Hygger ee...
Kalluun badan ayaa u baahan biyo diirran si ay ula jaanqaadaan xaaladaha dabiiciga ah ee degaankooda kulaylaha. Kuwani waa qalab muhiim ah haddii aan rabno kalluunka inuu caafimaad qabo. Waxaa jira noocyo badan oo kululeeyayaal ah. Kuwa ugu badan ee lagula taliyay waa kuwa leh nidaaminta heerkulka otomaatiga ah. Sidan ayaad ku dooran kartaa heerkulka ugu habboon ee kalluunku u baahan yahay inuu ku noolaado kuna ilaaliyo.
Dhinaca ay tahay in lagu xisaabtamo goorta iibso kululeeyahawaa in la arko inay ku adeegi karto qadarka biyaha ah ee ku jira aquarium-keena. Had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan in la iibsado mid ka weyn si uusan hoos ugu dhicin oo uusan u kululeynin biyaha oo dhan.
Nalalka Biyaha® BPS® ...
Iftiinka LED-ka ee Caddaan / Buluugga ah ...
Laydhka waxaa loo isticmaalaa in lagu matalo iftiinka qoraxda sidoo kale wuxuu bixiyaa muuqaal qurux badan oo guuleysta oo qurux badan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo laambadaha iftiinka ah. Laga soo bilaabo tuubooyinka dhaadheer ilaa qaar leh midabyo kala duwan, xargaha laydhka leh iyo kuwa haya laambada.
Laydhku ma raacayo qaabka adag, maaddaama ay tahay arrin dhadhan. Si loo go'aamiyo iftiinka loo baahan yahay waxaa jira qaab tilmaamaya inay tahay in la isticmaalo qiyaastii 30 lumen halkii litir oo biyo ah.
Qodob kale oo muhiim u ah iftiinka waa midabka iyo xoojinta. Haddii aan leenahay dhir dabiici ah oo biyo ah, waxaan u baahan doonnaa iftiin na siiya iftiin dabiici ah. Awoodda sare uma eka iftiinka qorraxda, sidaa darteed si ballaaran looma isticmaalo. Markay sare u kacdo nalka, ayay sii ballaaranayaan dhirta. Taas bedelkeed, way kori doonaan.
Kuwani waa qalab lagu dhejiyay aquarium-ka kaas oo u adeega kordhinta qulqulka biyaha iyo, iyada, kordhinta rajada nolosha ee kalluunka iyo dhirta. Kalluunka iyo dhirta biyaha ku jira waxay u baahan yihiin heer oksijiin ah oo biyaha ku dhex jira si ay ugu noolaadaan. Isbedelada biyaha, shaandhada iyo dhirta waxaa suurtagal ah in oksijiin lagu sameeyo biyaha. Laakiin waxaa jira waqtiyo aan ku filnayn oo waan ogahay u baahan aerators.
Hawlgalkeedu waa mid fudud. Waxay hawada ugu soo jiidaan quraaradda aaladda si ay naqaska iyo dhaqdhaqaaqa biyaha loo soo saaro.
Khasaaraha qalabkan ayaa ah inay u baahan yihiin cabbir adag si ay si fiican u shaqeeyaan. Hawada ay tahay in la saaro waa inay ka fogaataa khalkhalka kalluunka ama ha kicin haraaga wasakhaynaya biyaha.
Waxay siinayaan haanta kalluunka muuqaal qurxan oo qurux badan waxayna abuuraan jawi raalli ku ah isha, iyagoo abuuraya jawi leh qurux badan.
Tijaabada heerka tilmaanta biyaha
sumgott pH mitir, ...
Mitirka pH ee Eletorot...
Marar badan ayaa kalluunku dhintaa lamana oga sababta. Xitaa haddii aad haysatid dhammaan waxyaalaha kor lagu soo sheegay, waa inaad ogaataa xaaladda biyaha. Tan awgeed waxaa jira tijaabada biyaha.
Xuduudaha biyaha sida qiimaha pH (pH), wadarta adkaanta (GH), adkaanta karboonatka (KH), ammonium / ammonia (NH4 / NH3), nitrite (NO2), nitrate (NO3), fosfate (PO4) iyo bir (Fe) .
Mitiradahan ayaan ku ogaan karnaa xaaladda biyaha oo aan ku ogaan karnaa inay ku filan tahay iyo in kale.
Waxaan rajeynayaa in qalabkan aad ku heli karto aquarium-kaaga xaalad qumman.
by Natalia Cherry samee Bilaha 4 .
Caddeeyaha biyaha quraaradda ayaa kaalmo weyn u ah in biyuhu nadiif ahaadaan oo aan lahayn dareenkaas ...
Tijaabooyinka quraaradda laguma talinayo oo kaliya, laakiin waxaa loo qaadan karaa inay tahay qasab si loo ilaaliyo tayada biyaha ...
CO2 loogu talagalay aquariums -ka waa mowduuc leh jajab badan oo kaliya ayaa lagula talinayaa aquarists -ka ugu baahida badan, tan iyo ...
Waxaa jira tiro qurxin ah oo ah fikrado aad u fiican oo lagu qurxiyo quraaradda, laga bilaabo dhagaxyada ama ulo ilaa tirooyinka caadiga ah ...
Shaandhooyinka boorsada boorsada quraaradda
by Natalia Cherry samee Bilaha 5 .
Miirayaasha boorsada dhabarka ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay quraaradda quraaradda ah, ha weynaato ama ha weynaato, wax macno ahna ma leh haddii ...
Miirayaasha AquaClear waxay u ekaan doonaan qof kasta oo muddo ku dhex jiray quraaradda, maadaama ay yihiin ...
Xirmooyinka quraaradda oo dhammaystiran ayaa ku habboon in lagu bilaabo, taas oo ah, taageerayaasha adduunka kalluunka iyo ...
Waxaan hore u sheegnay dhowr jeer in kan ugu adag, sidoo kale ugu muhimsan, waqtiga ...
Qaboojiyaha biyaha waa wax aad loogu baahan yahay si loo nadiifiyo biyaha si toos ah uga yimaada tuubada oo loo rogo ...
Siphoner aquarium -ka waa mid kale oo ka mid ah aaladaha aasaasiga ah si loo awoodo in lagu fuliyo dayactirka aquarium -kayaga iyo ...
Heerkulbeegga kuleyliyaha waa aalad aasaasi ah oo gacan ka geysata in heerkulka quraaradda si buuxda loo xakameeyo. A) Haa…